Wararkii u dambeeyay 36 qof oo saacadihii la soo dhaafay laga helay Coronavirus - Jowhar Somali Leader
Home Somali Wararkii u dambeeyay 36 qof oo saacadihii la soo dhaafay laga helay...
Wararkii u dambeeyay 36 qof oo saacadihii la soo dhaafay laga helay Coronavirus
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 36 qof laga helay cudurka Coronavirus, kaddib baaritaan lagu sameeyay 24-kii saac ee la soo dhaafay.
36 qof ee laga helay Coronavirus ayaa ka mid ahaa 47 qof oo laga baaray cudurkan 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Tirada dadka uu soo ritay cudurkan ayaa haatan gaartay 116 qof, sida lagu shaaciyay Bar Internet ah oo hoos-tagta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha loo sameeyay in lagu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan Cudurkan Coronavirus.
“36 ka mid ah 47 qof oo maanta la baaray 24 saac u dambeysay ayaa laga helay covid19, 27 waa lab, halka 9 ay dhiddig yihiin. Fadlan muwaadin raac talooyinka bahda caafimaadka oo badbaadi naftaada, qoyskaaga iyo bulsahdaada”ayaa lagu yiri barta Twitter-ka Somalia COVID-19 oo laga maamulo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Bartan Twitterka ayaa lagu daabacay farriimaha ku saabsan wacyigelinta, iyadoo dadweynaha la siinayay talooyin ku saabsan inay guryahooda joogaan oo aanay bannaanka u soo bixin.
Qalabka lagu baaro cudurka Coronavirus ayaa la keenay magaalada Muqdisho, waxaana taasi sahleysa in 24-saac kadib la helo natiijooyinka baaritaanka dadka looga shaki qabo, halka markii hore ay natiijada baaritaanka qaadan jirtay muddo todobaad ah oo dalka dibaddiisa loo diray jiray si loogu soo ogaado.